Prof Jawaari oo laga hor istaagay tartanka kursiga HOP103 | KEYDMEDIA ONLINE
Prof Jawaari oo laga hor istaagay tartanka kursiga HOP103
Koofur galbeed, waxaa laga soo dooran doonaa 69 kursi, oo ay u soo codeyn doonaan 6,969 ergo, kuwaas oo doorashadoodu ka dhaceyso afar goobood, [Baydhabo saddex goobood iyo Baraaw hal goob].
BAYDHABO, Soomaaliya – Wararka ka imaanaya Magaalada Baydhabo, ayaa sheegaya in Guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan [Jawaari], uu maanta dib ugu laabtay Muqdisho, kadib markii Cabdicasiis Lafta-gareen ka hor istaagay u tartanka, kursiga uu ku fadhiyay baarlamaankii 10-aad ee HOP103.
Farmaajo, ayaa Prof. Jawaari, ku daray musharixinta ku jira bashqadda madow ee uu u gudbiyay Madaxweynaha Koofur galbeed, kuwaas oo Madaxtooyadu aysan dooneyn in dib ugu soo laabtaan baarlamaanka.
Jawaari, wuxuu Xukuumaddii Xasan Cali Kheyre iyo Farmaajo, hoggaaminayeen, ku diiday sharciyeynta dhiibistii Qalbi-dhagax, iyo in ururka ONLF, lagu daro Liiska Argagaxisada, taas oo sababtay in si qasab looga tuuro xilkii Guddoomiyaha Golaha Shacabka Apr 9, 2018.
Maxamed Sheekh Cusmaan [Jawaari], waxaa la filayaa inuu saxaafadda kula hadlo Muqdisho, kana warbixiyo boobka doorasho iyo is hor istaagga musharixiinta ee ka socda Baydhabo.
Farmaajo ayaa sugaya inuu kuraasta ugu badan ee Golaha Shacabka ka helo Maamulka Koofur-galbeed, wuxuuna durba gudbiyay dhamaan magacyada uu doonayo in loo soo saaro.
Dec 19, 2018, ayay Kooxda Farmaajo, Cabdicasiis Maxamed Xasan [Laftagareen] u boobeen doorashadii Madaxweynaha ee ka dhacday Baydhabo, taas oo u jeedkeedu ahaa inuu maanta u boobo kuraasta Baarlamaanka.
Guud ahan doorashada ayaa ku billaabatay boob, waxaana durba soo baxaya cabashooyin iyo sawaxan siyaasadeed oo lid ku ah hannaanka wax ku socdaan.